‘सरकारले के गरेको छ ? बुढाबुढीलाई सोध्नू’ « Kakharaa
‘सरकारले के गरेको छ ? बुढाबुढीलाई सोध्नू’
३० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समूह सरकारविरुद्ध मिसनसहित लगेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)द्वारा बुधबार आयोजित चियापान कार्यक्रममा सरकार विकास तथा मुलुकको समृद्धिको लागि प्रतिवद्ध भएर जुटिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सरकारले कसरी काम गरिएको छ ? यहाँहरुले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबाटै देख्नु भयो होला, रातारात कसरी काम भयो?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा काम नभएको होइन, सरकारले काम नगरेको होइन । तर यहाँ केही समूह र शक्ति सरकारविरुद्ध मिसनसहित लागेका छन् । सरकारले केही नगरेको मात्रै देख्नेहरु छन् । सरकारले राम्रो काम गर्दा नराम्रो मात्र देख्ने समूह नै छ ।’
प्रधानमन्त्रीले मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन एकतावद्ध हुन सबैलाई आह्वान गर्नु भयो । ‘सरकारले विकासनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ, मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त बनाउन लागि परेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । समृद्धिको लागि सबै एकतावद्ध हुन आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्रीले केही गरेन भन्नेलाई बुढाबुढीसँग सोध्न आग्रह गर्नुभयो । ‘केही पनि भएन भन्नेहरुले आँखा चिम्लेर भन्ने होइन, बुढाबुढीलाई गएर सोध्नु प¥यो के–के भएका छन भनेर ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बुढाबुढीको स्वास्थ्य विमा गरिएको छ, फरक प¥यो कि परेन ? सबै नेपालीलाई सय रुपैयाँ दिएर बैंक खाता खोल्न लगाइएको छ, नेपालको पानीमा जनताको लगानी भन्ने अभियान चलाएर सबैलाई उर्जामा सेयर होल्डर बनाइएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणसँगै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला जहाज समेत बस्न मिल्ने बनाइएको बताउनु भयो । ‘ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रातारात काम गरेर ठूलो जहाज पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले मुलुकमा भिन्नता ल्याएको छ कि छैन ? पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लागेको छ । भैरहवा विमानस्थल बन्ने क्रममा छ । केही पनि भएन भन्नेहरुले सरकारले गरेका काम आँखा खोलेर हेरे हुन्छ ।’